WowOW 8 intshi ebanzi kwindawo yokuhlambela ifenitshala Matte Mnyama
Ikhaya / Ukuhlamba igumbi lokuhlambela / Ukuphathwa kabini kwigumbi lokuhlambela lokuhlambela / WOWOW Igumbi lokuhlambela elimnyama faucet ngeSiphatho esahlukileyo seSwivel Spout
ikaliwe 4.91 Kwi-5 esekelwe kuyo 23 amanqaku umthengi
Izinto ezenziwe ngobhedu eziqinileyo ngokuthelekiswa nezinye izinto zentsimbi
Akukho sidingo sokukhathazeka malunga nokugqwala, imiba yokubumba.
Izinto ezisemgangathweni ezisemgangathweni, ukugcinwa lula, ukuzinza okuphezulu, ixesha elide kunye nobomi.
2320300B imiyalelo yokufaka
Ukukhetha iefesitile zegumbi lakho lokuhlambela 2320300B
Xa uyila okanye uhlengahlengisa igumbi lakho lokuhlambela, awunakuyijongela phantsi impembelelo yegumbi lokuhlambela. Oku kusenokwenzeka ukuba zezona zinto zincinci kwigumbi lakho lokuhlambela, kodwa nangona kunjalo ziindawo ekugxilwe kuzo kwindalo kwigumbi lokuhlambela. Nabani na ongena kwigumbi lokuhlambela lakho, ngokuzenzekelayo ujonga igumbi lokuhlambela ekuqaleni. Ke ngoko kubaluleke kakhulu ukuba ukhethe ngokufanelekileyo izitya zakho zegumbi lokuhlambela. Iifestile zegumbi lokuhlambela ziza ngeendlela ezininzi, iimilo kunye noyilo. Ukukhetha isuntswana lokuhlambela elifanelekileyo kunokuba ngumceli mngeni kwabanye. Isikhuselo esifanelekileyo sokuhlambela sinokunika igumbi lakho lokucoca ubuntu obuchukumisayo obuyimfuneko. Inokwenza imeko.kubonakala ngokubanzi kwigumbi lokuhlambela lakho. Kodwa ngaphezulu kwako konke, iitawuli zokuhlambela kufuneka zihambelane nesitayile sokuhlambela sakho sonke. Yiyo ke loo nto unokufuna ukuqwalasela yonke imiba yefenitshala yokuhlambela ocinga ngayo. Nangona kunjalo, masingalibali ukuba ukuyila okanye ukuhlela ngokutsha igumbi lakho lokuhlambela yeyona nto inomdla kuyo. Uyakwazi ukuyila igumbi lakho lokuhlambela elitsha ngokupheleleyo ukuba ungcamle. Masikuncede ke ngoko sincede ngesikhuseli sendlela yokuhlambela emnyama ebanzi.
Itafile yegumbi lokuhlambela elinabileyo
Umahluko ophambili phakathi kwefenitshala yokuhlambela ebanzi kunye nolunye uhlengahlengiso, kukuma kwesikhundla, kokubini eshushu nokubandayo. Kwigumbi lokuhlambela elinabileyo elandayo izinto zokubamba zibekwe kwicala ngalinye lesikhombisi ngokwaso. Kwiziko elisetiweyo leefiyiti umzekelo, usebenzisa umngxunya omnye obiwe kwisinki. Kwelinye icala, ngephedi enye yomngxunya umzekelo, unokulawula amanzi ashushu nabandayo ngesibambo esinye kuphela. Ngokuqhelekileyo, ngesiciko sendlela yokuhlambela esidlangalaleni kuya kufuneka ukuba ubethe imingxunya emithathu kwigumbi lokuhlambela kwaye ulawula amanzi ngeendlela ezimbini ezahlukeneyo zokuhambisa amanzi ashushu nabandayo. Oko kwenza ukuba kube lula ukulawula ngokuchanekileyo ubushushu bamanzi. Ukukhetha isuntswana ebanzi lokuhlambela, unikwa iindlela ezahlukeneyo kunye nokugqitywa. Unokwenza ifuthe elinobunkunkqele kwidécor yakho ngombala omnyama. Ngokuqinisekileyo oku kuyakwenza ukuba igunjana lakho lokuhlambela libanzi njengesixhobo esitsala ngamehlo kwigumbi lokuhlambela. Ngaphandle kokuthanda kwakho kuya kufuneka ukhethe ukusebenza. Ngaba ufuna ukuba ifektisi yakho ebanzi yomnyama ebanzi yenze ntoni? Xa usenza ukhetho, khetha nje isikhuseli esimnyama sokugubungela indawo emnyama njengendawo ekugxilwe kuyo yoyilo lwakho lwegumbi lokuhlambela elitsha.
Isikhuseli esimnyama sokuhlambela kwigumbi lokuhlambela
Ubumnyama bunokuba yinto ephambili kwindlela yakho yokuhombisa. Ngokukodwa xa kukho ezinye izinto ezimnyama kwigumbi lakho lokuhlambela. Isikizi esimanzi sokuhlambela esimnyama siya kuhlangana ngaphandle komthungo kunye noyilo lokuhlambela lwakho. Ngokucacileyo ungenza umehluko ngesikizi esimanzi sendawo yokuhlambela kwigumbi lakho lokuhlambela. Okokuqala ngenxa yokuba iindawo ezimnyama zokuhlambela iifestile zikhethekile. Kuba abantu abaninzi bengoyiki ukusebenzisa olu loyilo ngesibindi kwigumbi lokuhlambela, unokuyila igumbi lokuhlambela lakho kunye neli faquet igumbi lokuhlambela limnyama le WOWOW. Hayi kwindawo yokugqibela kuba inika le ndawo kugxilwe kuyo kwigumbi lokuhlambela liphela ukuze ungayijongeli phantsi. Igumbi lokuhlambela lakho liya kuba kude nomgangatho kunye negumbi lokuhlambela elimnyama elinabileyo le-WOWOW. Ngaphandle kwamathandabuzo nabani na obona isidalwa sakho sangokuhlwa esahlukileyo, uya kumangaliswa naso. Kwaye hayi kwindawo yokugqibela ngenxa yokuphamba okumnyama okubanzi kwindawo yokuhlambela oyikhethileyo.
Phambi kwesitayile kufuneka uthathe usetyenziso olusebenzayo kuqwalaselwa. Yintoni injongo yegumbi lokuhlambela elenzelwe ubuhle obungazisebenzisiyo iimfuno zakho? Ngokucacileyo uthatha isigqibo malunga nendlela ofuna ngayo izixhobo zakho zegumbi lokuphumeza iminqweno yakho. Ngokufana nenxalenye yoyilo, izitya zokuhlambela zincinci zinempembelelo enkulu. Oko ngokucacileyo kuyasebenza nasekusebenzeni.
Ukudibanisa ngokufanelekileyo itafile yegumbi lokuhlambela
Indawo yokuhlamba igumbi lokuhlambela elimnyama laseWOWOW lilungele uninzi lokuhlamba. Kodwa kunjalo, inokuba yinxalenye enye ehambelanayo kunye nokuyila kwendlela yakho yokuhlambela. I-Wowow ke ineendawo zokuhambisa ezimnyama zokuhlambela, umzekelo umzekelo oomatshini bokuhlamba abamnyama, izitampu zokuhlambela abamnyama kunye neempompo zokuhlambela ezimnyama. Ngale ndlela unokuyila igumbi lakho lokuhlambela ngokuvisisanayo kunye nezinye izitayile zokuhlamba ezimnyama. Uya kwenza umbono omkhulu ngayo! Ngaphandle koko, itafile yokuhlambela emnyama ebanzi yeWOWOW iya kukubonelela ngokusebenza kwakho onqwenela. Lo mgaqo wokuhlambela ubanzi wabamnyama wenziwe ukuba wenze umgca wale mveliso yanamhlanje, encinci kunye neyangoku yemveliso yokulungiswa kwegumbi lokuhlambela. Ngapha koko, le faupet yegumbi lokuhlambela imnyama ye-WOWOW yomibini icwebezelisiwe kwaye inobuchwephesha ngokunjalo. Isithinteli setop-up esimanyanisiweyo siyilelwe ngokudibeneyo, ukanti sikunika ulawulo olugudileyo. Nabani na obona le faucet ibanzi yomnyama ebanzi iya kuchukumiseka yoyilo kunye nokusebenza kwayo. Ngokuqinisekileyo yayilwe ngombono ocacileyo nohlukileyo. Itafile yokuhlambela esemgangathweni ophezulu yendawo yakho yokuntywila, Njengazo zonke iimveliso zayo, I-WOWOW isebenzisa ezona zixhobo zingcono zomgangatho wokukhuphelwa kwigumbi lokuhlambela. Uyakuqaphela oku umzekelo xa usebenzisa izibambo zale faucet igumbi lokuhlambela ngokubanzi. Umgangatho uqinisekisa ukuzinza okungcono kunye nokusetyenziswa kobomi obude. Isikwere esikhulu esikwere siphezulu sasiyilelwe ngendlela umzekelo apho amathontsi engachithwanga ngenxa yobude bawo. Umphezulu wale ndlwana igumbi lokuhlambela umnyama umnyama, kodwa izihlanganisi zenziwe ngobhedu. Izixhobo zobhedu eziqinileyo ngokuqinisekileyo lukhetho olungcono ngokuthelekiswa nezinye izinto zensimbi. Akunyanzelekanga ukuba ube nexhala malunga nomzekelo corrosion. Ukuqina kwale faucet igumbi lokuhlambela elimnyama ke kuyaqinisekiswa. Ngaphandle koko, umphezulu u-anti kwaye ungasasebenzi, ke uya kuqinisekiswa ngenkangeleko entsha ixesha elide. Lo mbala wamanzi umnyama uphezulu wamanzi wokuhlamba isitayile sokucofa kwakho iya kuba kukugqibelela kokuchukumiseka koyilo lwakho lokuhlamba.
Ukufakelwa ngokulula isitya esimnyama sendlu yokuhlambela
I-faoet yokuhlambela emanzi ngokubanzi yeWOWOW kulula ukuyifaka isikhokelo sayo sokufaka ngokukhawuleza. Amanzi abandayo nashushu angadityaniswa ngokulula nesinxibelelanisi esikhawulezayo. Kwisitofu sokuhlambela kunye neziphatho ziya kudinga imingxunya emithathu yoku-1 "-1.5" kwaye isitayile esitshixekileyo sinokuba ngu-0.2 -1.2 ”ubukhulu. Isitshixo sendlu yokuhlambela esimnyama esandileyo sinokuseta i-4 ukuya kwi-16 intshi enye nganye, ngokwesitayile sakho. Njengoko indawo yokuhlambela emnyama ebanzi ibanzi kwaye kulula ukuyigcina nayo, uWOWOW akoyiki ukubonelela ngesiqinisekiso seminyaka emi-5 kwimveliso yaso. Into ikhuselwe ngumgaqo-nkqubo weentsuku ezingama-90 zokubuya simahla. I-Wowow ithembela isuntsu yayo yokuhlambela emnyama ebanzi kwaye inokwaneliseka kuphela ngumthengi we-100%! Izibonelelo ze-WOWOW Black Widepread Bathroom Faucet ngapandle koku:
 Ukudibana okwahlukileyo koyilo lwakudala nolwanamhlanje
 Bonelela ngenkqubela phambili yokusebenza ehambelana neemfuno zakho
Dibanisa ii-esthetics kunye nokusebenza okuphezulu
itephu yekhitshini ngokukhupha isitshizi
iintloko zokutshiza umbhobho wasekhitshini
itephu yekhitshi yidilize
I-SKU: 2320300B iindidi: Ukuhlamba igumbi lokuhlambela, Ukuphathwa kabini kwigumbi lokuhlambela lokuhlambela tags: Mnyama, Ukwahlula Ukuphatha, Izibambo eziBini
Imveliso iyazithethela. Ufakelo lwalunzima kancinci kunesiqhelo ngenxa yedreyini endala. Kuthathe ixesha elide ukuyikhupha kodwa emveni koko yonke into ihambe ngokocwangcisiweyo. Jonga imifanekiso, njengoko benditshilo, le mveliso iyazithetha
Awungekhe uhambe gwenxa ngale set! Zenziwe kakuhle kakhulu kwaye zinomsebenzi onzima ngexabiso ebendingalindelanga. Sijonge eDepho yaseKhaya naseLowes kwiipompo zamanzi amnyama kuqala. Akukho namnye ophantse waba mhle kwaye bonke ubuncinci bephindwe kabini okanye kathathu ngexabiso. Sanelisekile NGOKUQHELEKILEYO ngale seti!
Imveliso enkulu yexabiso, ngekhe wazi ukuba ibiphantsi kwe- $ 100. Ijongeka intle kwaye intle kwaye ndiyasithanda isiphelo sematte. Ingena ngokugqibeleleyo kwigumbi lam lokuhlambela kwaye isebenza kakuhle kakhulu.
Ndiyithande ngokupheleleyo le faucet! Kulungile kwaye kunzima ngexabiso elifanelekileyo! Ifakelwe iinyanga ezi-4 ezidlulileyo kwaye akukho ngxaki. Umdlalo omnyama omnyama omnyama uhambelana nezinye izixhobo zethu zokuhlambela ngokugqibeleleyo.
Ngokwenyani kufana nokubonakala kunye netephu kunye neenqanawa kodwa isitshixo sokumisa amanzi sokugcina siqhubeka sijika umbala. Ndibuyise iseti yokuqala endiyithengileyo kuba yajika umbala omhlophe-ish emva kokuba siyisebenzise okokuqala. Sifumene umntu othatha indawo yakhe kwaye owesibini naye wenze njalo. Nditsho bummed. Ndiyayithanda inkangeleko yokulungiswa kwigumbi lokuhlambela elitsha kodwa andinakukuqonda ukuba kuqhubeka ntoni ngesimamisi. Sizamile iintlobo ezahlukeneyo zokuthambisa kunye neesepha ukubona ukuba wenza umahluko kwaye khange wenze njalo. Sizamile izisombululo ezahlukeneyo zokucoca kunye noMatshini wokuCoca uMlingo ukuzama ukuzicoca kodwa akukho nto iyincedayo ekubumbeni umbala. Ngendizinike ngokupheleleyo ezi nkwenkwezi ziyi-5 ukuba oku bekungenzeki ngeziciko zokumisa amanzi!
Umgangatho wale mpompo yokuhlambela uyoyikeka nje. Besele ndixelele ukuba yenziwe kakuhle kwaye inzima. Ndakhangela kuyo yonke indawo olu hlobo lwetephu yokuhlambela, kodwa akukho namnye kubo okoko unelungelo elifanelekileyo lokuhlambela. Amaxabiso kwezinye iivenkile abiza kakhulu kunale. Inkqubo yofakelo yayicacile kwaye yonke into ihamba njengoko kufanelekile. Inkqubo iphumelele kakhulu kwaye ilula nayo. I-drain stopper yayiyinto entle ukuyifaka kwiseti. Umbala kanye ngumbala lowo bendiwukhangela. Ibhobho yokuhlambela ime kakuhle kakhulu kwigumbi lokuhlambela. Ndicebisa le mveliso kuye nakubani na kwaye ngokuqinisekileyo uya kuziva ukuba kufanelekile ngepesenti nganye oyithengele yona.
Ukuza kuthi ga ngoku, kuhle kakhulu! Kuthathe umyeni wam iiyure ezimbalwa ukufaka ezi zinto zimbini kodwa kungenxa yokuba izinto esele zikhona kunzima ukuzisusa. Ndiyayithanda idreyini yokutyhala… kulula kakhulu ukuba abantwana bayisebenzise. Ukulungiswa kumnyama tyaba njengoko kuchaziwe kwaye lixabiso elingakanani kwinto oyifumanayo. Ukuba kukho into etshintsha, ngokuqinisekileyo ndiza kuluhlaziya olu hlaziyo.
Ndonwabile kakhulu ngenkangeleko, umsebenzi kunye nomgangatho wale seteti yetephu. Ukugqiba kuhle. Yonke into malunga nokuseta kubandakanya ukupakisha inhle kakhulu kunexabiso elifanayo 'labakhi' elithengiswe eLowe naseKhaya Depot.
Iibucks zilungile ngenene kwento yethu engeloncedo esiyithengileyo enemingxunya emithathu esikwe kwindawo ekumelana nayo yemarble. Umyeni wam wakrwitshwa ukufa malunga nendlela ekulula ngayo ukuyifaka, kulula kakhulu kunoninzi. Ilula kakhulu kangangokuba wandicela ukuba ndithengele enye yesibini yokuhlambela enye esiyenzayo kwakhona ngoku. Ndenze njalo ke! Intle ngokwenene kwaye inobunzima kuyo, ayisiyongozi kwaphela.
Ukuhlaziya igumbi lokuhlambela kwaye kwinkqubo saye saqonda ukuba itepu yethu endala indwebile. Sifakile le faucet intsha imnyama kwaye iyamangalisa! Ijongeka ilungile KAKHULU, kwakulula ukuyifaka, kwaye ndiyayithanda idreyini yokutyhala / yokupasa!
Le tephu intle. Imile inde kodwa ayide kakhulu. Yenziwe ngokuqinileyo. Akuzange uzive ungabizi konke konke. Eli lixabiso elikhulu kunye nemveliso esemgangathweni.
Kufakwe oku kwigumbi lokuhlambela lentombi yam kwaye kusebenze kakuhle. Kulula ukuyifaka, ijongeka kwaye isebenza kakuhle. Sele zinezicwangciso zokuthenga ngakumbi kwaye endaweni yezinye iibhobho zokupompa kunye naleyo inye.
Ndithenge le nto kulungiso lwendlu yangasese. Impompo elungileyo kakhulu kwaye ixabiso lilungile. Ayingomntu othanda ukuphuma kwamanzi kodwa kufanelekile ngomgangatho ngeli xabiso.
Emva kokuthenga kwibhokisi enkulu yokuphucula abathengisi basekhaya, umyeni wam wafumanisa ezi zinto zilungiselelwe kwi-WOWOW kwaye zazimalunga nesiqingatha sexabiso labo basezivenkileni. Ukuba yeyona nto iphantsi endiyiyo, bendonwabile ukugcina imali, ngakumbi xa uphononongo lwalulungile. Ezi zinto zilungisiweyo ngumzekelo wokuba ufumana ngaphezulu kokuhlawulelwayo. Uyilo luhle kwaye ukupakisha kwakumnandi kakhulu - kwakukhusela umphezulu njengokuba umzali ekwishumi elivisayo. Ekuphela kwento engathandekiyo kukuba esinye sezibambo sigqibile ukukrwela umphezulu kuwo. Ukunikwa konke ukupakishwa, kwakumangalisa ukuzibona kodwa mhlawumbi i-QC yayisenza olo hlobo lokubaleka. Ngethamsanqa ukungafezeki kusemacaleni omqolo ukuze kungabikho mntu uya kuzibona ngaphandle kokuba mhlawumbi bendigobele intamo yam kwindawo engeyiyo eyendalo. Besingenalo ixesha lokuthumela iseti emva. Impompo inde kakhulu xa ithelekiswa neepompo ezininzi zokuhlambela ekulungeleyo ukuzalisa iibhotile ezinde. Ngokuqinisekileyo singacebisa le mveliso kubahlobo.
Ndithenge le nto kwigumbi lokuhlambela esiza kuphinda sililungise kwixa elizayo, ke andifuni ukusebenzisa imali eninzi kuyo, endaweni yokuthenga ipompo esemgangathweni yeMoen okanye itephu yeDelta njengokuba ndinayo kwamanye amagumbi okuhlambela, ndiyithengile le Nye. Andizange ndiyazi ukuba ndiza kufumana umpompo osemgangathweni onesiqingatha sexabiso! Zonke izihlanganisi (ngaphandle kwezinto zokuxhuma ezikhawulezayo) ziyintsimbi. Ayisosinyithi senziwe ngesinyithi okanye iplastikhi enemibala ye-chrome- ityhubhu yentsimbi enezixhobo zesinyithi kunye nezihlanganisi. Oku akunjalo ngeefompu zebrendi zepremiyamu kabini kwixabiso. Umgangatho ubalasele, uyilo lukhulu kwaye kulula ukuyifaka, kwaye ukugqiba kuyomelela kwaye kuyamelana nebala. Iye yaba ngumbhobho wethu wokuhlambela owuthandayo ekhaya. Yayipakishwe kwaye ikhuselwe ngokufanelekileyo kwaye ikwimeko entle xa ifikayo. Ekuphela kwento engalunganga endinokuyithetha kukuba imiyalelo yokufaka ibinokucaca kwaye isilele ngcaciso. Ngaphandle kwalonto, oku kukuthenga okuhle kakhulu- xa ixesha lifikile lokutshintsha ezinye iipompo ndiza kuba ndikhangela ezi endaweni yokuhlawulela igama lophawu olukhulu. Kucetyiswa kakhulu.
Ukugqibelela! Andizange ndifake nantoni na enje ngaphambili, kwaye ndiqinisekile ukuba kundithathe ixesha elide kuba ibilixesha lokuqala ndiyenzile- kodwa eneneni bekungekho nzima ukuzenza ndedwa! Elona candelo linzima yayikukuthatha itepu endala. Ndonwabe nyani yile faucet isasazekileyo.
Ukugqibelela! Andizange ndifake nantoni na enje ngaphambili, kwaye ndiqinisekile ukuba kundithathe ixesha elide kuba ibilixesha lokuqala ndiyenzile- kodwa eneneni bekungekho nzima ukuzenza ndedwa! Elona candelo linzima yayikukuthatha itepu endala. Ngokonwaba nyani nditshintshe iipompo zangasese ezi-3 ngezi. Ukufakwa ngokulula okulula ukuba umngxunya wakho ubungakanani obufanelekileyo, awam awukho. Ndicinga nje ukuba zonke ziyafana. Nje ukuba ndigqobhoze imingxunya yam ngaphandle okukhulu andinangxaki. Bahleli ngaphezulu kwesinki ephezulu enika ukubonakala kwesinki enkulu. Abancamathelisi ngakumbi kunale bendinayo.
Sathenga amampunge amatsha eza nombhobho "wasimahla", wawutshiphu ke saye sagqiba kwelokuba sithenge into endaweni yoko. Saya kwiivenkile ezinkulu zokuphucula ikhaya kwaye yonke into yayihambile kakhulu ijonge incasa yam kwaye ijikeleze i-150 yeedola. Sithathe isigqibo sokujonga kwi-Intanethi kwaye sayifumana le ngokulula kwisiqingatha sento ebesiyi kuhlawula. Ijongeka intle kakhulu ngecomputer yethu yeZinc kwaye iziva yomelele kakhulu.
Ukungabandlululi ngokwesini sam, konke konke, kodwa ndingumfazi owayefuna ukubuyisela indawo yam yokuhlambela kunye nefompe, ndedwa. Ndithengile le faucet, ndayivula kwaye ngaphakathi kwemizuzu engama-45, yayifakwe kwisinki yam entsha. FAKA KULULA !!
Ezi zezona mpuku zintle ndizizisileyo. Sihlengahlengise nje, ndaye ndathenga ezinye ezazingama "brand brand" kodwa ndinqwenela ukuba ndizifumene zonke ezi zinto. Bacinga ngayo yonke into! Imveliso ikumgangatho ophezulu. Thenga ezi kwaye awuyi kuzisola.
Ndithenge ezi zimbini zenzelwe inkosi yethu yokuhlamba kwakhona. Ndandinomcimbi omncinci ngeseti enye kodwa inkampani yayikhathalela ukubuya kwayo ngaphandle kwengxaki. Ndichukunyiswe kakhulu ngumgangatho kunye nembonakalo yokuvuna encinci yeeseti ezihamba ngokugqibeleleyo ngokuhombisa kwethu.
Le tephu inesiphelo esihle kakhulu. Ukugoba kwetephu kuhlala phezulu kangangokuba kukho indawo eninzi yokuba uhlambe izandla. Isiqwenga sedreyini ebandakanyiweyo, sikhulu, naso.
Iseti yombhobho entle ngokwenene. Zibukeka zintle kumampunge am amatsha. Omnye wemisele yokuphuma wawungekho, kwaye inkonzo yabathengi yaphendula kwangoko ukuba ithumela enye.